မြန်မာ (9) ကမ္ဘောဒီးယား (4) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (2) Global (1) ထိုင််း (1) ဗီယက်နမ် (1)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (12) ခမာဘာသာစကား (3)
PDF (8) CSV (3) HTML (3) SHP (2) DB_TABLE (1) GeoJSON (1) GeoTIFF (1) TIFF (1) WMS (1) XLSX (1)
Open Development My... (8) Open Development Ca... (4) Open Development Me... (2) Open Development Laos (1)
လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆ... (15) လူဦးရေ (6) အစိုးရ (3) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (3) ပညာသင်ကြားနိုင်မှု (2) အုပ်ချုပ်ရေး (2) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (2) ကျား၊မ သဘော (2) မြေယာ (2) ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထ... (2) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတ... (2) ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာ... (1) စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်မ... (1) စိုက်ပျိုးရေး (1) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (1) ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျ... (1) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (1) စီးပွါးရေးနှင့် ကုန... (1) စွမ်းအင် (1) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (1) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (1) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု (1) အတည်ပြုခန့်အပ်ထားသေ... (1) အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်... (1) ဆေးရုံနှင့် ဆေးခန်း... (1) လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုန... (1) မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်... (1) လူဦးရေနှင့် သန်းခေါ... (1) မူလတန်းနှင့် အလယ်တန... (1) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဦ... (1) ပြည်နယ်နှင့် ဒေသအစိ... (1) လမ်း၊ တံတားများ (1) Sustainable develop... (1) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိ... (1) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (1)
Creative Commons At... (6) CC-BY-SA-4.0 (2) License not specified (2) unspecified (2) Attribution-NonComm... (1) CC-BY-4.0 (1) Creative Commons At... (1)
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Ministry of Foreign Affair and International Cooperation 2021 စီးပွါးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး, လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, အစိုးရ
This dashboard series aim to illustrate an overview on different situations and status of Cambodia including demographic profiles, economic budget, economic and financial...
Global Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) UNDP 2020 ကျား၊မ သဘော, ပညာသင်ကြားနိုင်မှု, လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
The HDI was created to emphasize that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development ofacountry, not economic growth alone. The...
ကမ္ဘောဒီးယား 2884 BrK ကြေညာချက် 2020၊ 1 ဇူလိုင် ပြည်နယ်နှင့် ဒေသအစိုးရများ, ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း နှင့် အာဏာမျှဝေသုံးစွဲခြင်း, လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
This Prakas aims to identify the transfer of authority on the provision of residence and family record books to streamline the ease and speed of registering the residence and...
၂၀၁၅-၁၆ ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွား/သေစာရင်းနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း -အဓိကအညွှန်းကိန်းများဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ
မြန်မာ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန (MOSH) နှင့် ICF နိုင်ငံတကာ 2016 ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဦးစားပေးထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး, လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ
ဤ (၂၀၁၅-၁၆) ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွား/သေစာရင်းနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်စစ်တမ်း (MDHS) သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူ ဦးရေနှင့်ကျန်းမာရေးစစ်တမ်းအစီအစဉ်နှင့်ပူးပေါင်း၍ မြန်...
ကမ္ဘောဒီးယား 103​​ ANK.BK Sub-decree 2000၊ 29 ဒီဇင်ဘာ လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
Sub-Decree No. 74 on the Family Record Book
ကမ္ဘောဒီးယား 74 ANK/BK Sub-decree 1997၊4နိုဝင်ဘာ လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, အစိုးရ, ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
This Sub Decree states about the how to establishafamily record book with model attached in annex of this Anukret.
ဗီယက်နမ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, ထိုင််း, မြန်မာ Profiles - Geographical areas and sites United Nations Population Division 2000 လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့် ကွာရှင်းပြတ်ဆဲမှု, လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း